Garisa:-Dadweynaha magaalada Gaarisa caasimadda gobolka waqooyi bari Kenya, ayaa xaalad adag wajahaya Ciidamada Militeriga ee dalka Kenya, oo shalay magaalada Gaarisa 3 askari looga dilay ayaa dhibaato xoog leh ka wada magaalada, iyagoona dhibaatadaas u geystay shacabka magaalada ku nool iyo hantidooda.
Maanta oo kaliya waxaa magaalada ku dhaawacmay dad ku dhow 20 qof, hal qofna wuu dhintay, iyadoona dhaawacyada lagu dabiibayo Isbitaalka guud ee magaalada Gaarisa.
Dadweynaha oo markii horeba la anfariirsanaa jirdil iyo dhac loo geystay hantidooda, ayaa falkan maantana aad uga sii carooday, waxaana sidoo kale hadalo kulul warbaahinta ka jeedinaya xildhibaanada deegaanka laga soo doorto.
Wasiirka Gaashaandhigga Yuusuf Xaajo oo reer Gaarisa ah, ayaa maanta tagay magaalada, iyadoona uu xalay shaaca uga qaaday inuu talaabo adag ka qaadi doono saraakiisha hoggaamineysa askarta dhibaatada ka geystay magaalada Gaarisa.
Hoos ka Daawo Xaalada magaalada Garisa